Iindlela zezilwanyana zonyango lwe-cystitis
I-Cystitis isifo esifanelekileyo kubantu abesini zesini. Xa eso sifo siphelile, iimbumba ezinamaqabunga e-bladder. Ukuvela kwe-cystitis, ngokuqhelekileyo kwenzeka xa kukho naluphi na ukhuseleko kumzimba. Ubukho emzimbeni weyiphi i-ureaplasma, i-mycoplasma sulelo, i-streptococcus, i-staphylococcus, i-Escherichia coli ingabangela i-cystitis. Esi sifo sithatha unyango, kwaye kweli nqaku siza kuqwalasela iindlela eziqhelekileyo zokwelashwa kwe-cystitis.
I-Cystitis ithintela ikakhulukazi abasetyhini, nangona abameli besigxina sesintu bahlala begula. Phakathi kwabasetyhini, amantombazana ekukhuleni abantwana banokuthi bavelise i-cystitis. Oku kubangelwe kwizinto ezikhethiweyo zesakhiwo se-anatomical. Kwimfazi, irerera ibanzi kwaye imfutshane kunomntu, ngoko ukusuleleka kulula ukungena kumbhinqa wesifazane. Nokuba i-cystitis yonyango inokuphinda ngaphezu kweyodwa kwindoda.
Iimpawu ze-cystitis azikwazi ukuhlala zilula ngokulula. Kodwa ugqirha kufuneka uqhagamshelane ukuba ufumana ezi zilandelayo mqondiso.
Ukuvuthwa okubuhlungu, umvakalelo we-rez kunye nokutshisa yiyona nto inokuba yimihlobo ye-cystitis. Ubuhlungu kwisisu esisezantsi, kaninzi, sihamba rhoqo nesifo. Mhlawumbi uvakalelwa kukuba isambatho asipheli ngokupheleleyo. Kwenzeka kwaye ukungabikho komchamo, xa kukho ukuziva ukuba akunakwenzeka ukunyamezela. Ngaphandle, umchamo unobungqingili, kwaye ngamanye amaxesha igazi likhoyo. Kwaye ukuba izinga lokushisa lomzimba libuye lifike kuma-37.5 degrees, khawuleza ubonane nodokotela ukuba ungaphoswa zizifo zesifo.
Iidyipeshi zokunyanga kwamayeza e-cystitis anika uninzi. Kubalulekile ukuba ukhethe unyango olufanelekileyo kakhulu olulungele umzimba wakho. Nazi ezinye zazo.
Hlanganisa ama-gramu ama-5 amahlumela we-thuja ngamacembe e-bearberry, utywala kunye ne-birch buds, uthele 1 ilitha yamanzi uze ubilise imizuzu emi-5-7. Ngethuba lomhla kufuneka uphuze umhluzi wonk ', rhoqo emva kokufudumala.
I-bladder iqiniswa ngomxube olungiselelwe kwi-pulp anyanisi, i-apula kunye nobusi. Zonke izithako zithathwa 1 ithisipuni. Gxininisa kakuhle, yidle eli liyeza isigama seyure ngaphambi kokutya. Ngalinye ixesha umxube kufuneka ulungele ukulungiswa kwakhona, kufuneka ukuba ube yintsha.
Kuhlamba ngamanzi, ubilise 1 indebe ye-oat grains kunye neiglasi ezi-2 zamanzi de kube ngumzuzwana xa utywala lukhuphukela kwisiqingatha. Shayela isipuni 1 se-honey kwi-broth. Phuza kathathu ngosuku malunga nesiqingatha seglasi.
Ungayisebenzisa ukulungiselela ukuhlaziywa kwe-okusanhlamvu ye-oats kuphela, kodwa ne-oat straw. Ichithwa ngamanzi abilayo kwisilinganiselo sama-40 grams ukuya kweyure 1 kwaye ibilisiwe imizuzu eyi-10. Emva koko uhlambele kwaye ucofeze amaxesha amathathu ngosuku ngeglasi 1.
Thatha i-aspen buds, i-bark okanye ishiya ama-20 amagremu uze uthele iglasi yamanzi ashushu. Beka ibilise iminyaka engama-7-10. Emva koko uyigqoke ngokucophelela kwaye uyivumele ukuba ibhalele ihafu yesure. Ukufakelwa kwamanzi okucoca ukusela kathathu ngosuku ngeepunipoli ezi-2.
Imifuno ye-Aspen ayibi ukugxininisa kwi-vodka okanye i-70% yotywala ngokumalunga ne-1 ukuya kwe-10. Thatha i-25-30 yehla eyokusa, isidlo sakusihlwa kunye nobusuku. Bobabini umhluzi kunye ne-tincture inikezela uncedo oluxabisekileyo ngexesha lokuxhatshazwa kwe-cystitis engapheliyo kunye ne-bladder ebuthakathaka.
Ukuba ukucoka kunzima, thatha isipuni se-1 ngeglasi yeentyandi zezimbali (ezifanelekileyo kunye ezitsha kunye ezomileyo). Yongeza iglasi yamanzi abilayo. Gquba ihora kunye nento efudumeleyo. Oku kutywala kufuneka kudakwe 2 iipunipoons ukuya kumaxesha amathathu ngosuku. Unyango luhlala iiveki ezimbini. Emva koko iiveki kufuneka iphumle, kwaye ukuba imfuneko ayifuni, qhubeka unyango.
Thatha iibheyipuni ezimbini i-yarrow, uthele nge-200 ml yamanzi abilayo uze ugxininise malunga neyure. Uxinzelelo lwe-Infusion kwaye uphuze ngaphambi kokuba utye indebe ye-1/4, ngokwaneleyo amaxesha amane ngosuku.
Gxuma uze utyumbe iingcambu zeenja. Thatha iipunipoyi ezi-2 zezimpande ezilungiselelwe kwaye uthele ama-200ml wamanzi ashushu. Emva kwemizuzu eyi-15 yokubilisa, gxininisa ubuncinane iiyure ezingama-2 kunye noxinzelelo. Phuza ngaphambi kokutya kwe-cup cup infusion, ngosuku lwesine. Iyancipha ukuvuvukala kwi-bladder.
Phala i-gram e-7 ye-birch ishiya i-1/2 yelitha yamanzi atshisayo, emva kwemizuzu eyi-10 yokubilisa, ugxininise kwaye uxineke. Phuza i-50 grams ekuseni, ngesidlo sakusihlwa kwaye kusihlwa ngexesha lokutya. Phuza ukumnika xa kukho isikrokrelo sokuvuvukala kweentso okanye isantya. Njenge-diuretic, ayivumeli ukubunjwa kwamatye e-urinary.
Hlanganisa iziqabunga zamehlo kunye ne-oak bark kunye namaqabunga ebhereberry. Phala i-1punipoon ye-1 mix cup 1 eyobilisa yamanzi abilayo kwaye ubeke ebhakeni lwamanzi imizuzu eyi-15. Emva koko umelela umhluzi ngesigamu seyure kunye noxinzelelo. Ukusela ngokuhlwa nge-1 ingilazi yomhluzi ofudumeleyo.
Iipunipoyi ezi-2 ze-elderberry utshani, i-barberry eqhelekileyo, i-juniper eqhelekileyo, i-kidch birch emhlophe ixutywe ne-1 isipuni se-chamomile pharmacy. Iipunipoli ezi-3 zokuqokelela uthele 1 litre yamanzi abilayo. Thatha i-½ indebe izikhathi 6 ngosuku.
Iipunipoli ezi-2 (nge-slide) yentsimbi yokutya ingca ye-1 litre yamanzi, yilise imizuzu eyi-10. Gubungela ukufudumala imizuzu engama-20, uze udibanise. Ingca akufanele iphoswe, kodwa yifake kwisikhwama sekhanda uze uyibeke ngaphantsi kwesisu ngesimo eshushu. Umhluzi - ngaphakathi, amaxesha amathathu ngosuku ngemiglasi eyi-1.
Intsimi ye-Horsetail kunye neentyantyambo ze-chamomile ezixutywe kumlinganiselo we-1: 1. Phalaza amanzi aphelayo. Phuza utshisa kwi-sips encinci, kodwa rhoqo. Ukusetyenziswa kwemini kungekho ngaphezu kwezi-3 zeglasi. Unciphisa intlungu ngexesha lokuchama.
Kwizifo zezintso, kunye ne-urinary tract kunye ne-vestile, nquma i-1 teaspoon yeengcambu ze-ayr marsh, kwaye, uthele i-1 indebe yamanzi abilayo, ugxininise imizuzu engama-20, ubunzima. Phuza isiqingatha seyure ngaphambi kokutya kwi-½ indebe, ngosuku 4.
Ukuba uneprotheyini efumaneka kumchamo wakho, zama ukubonisa unyango. 1 ithisipuni ye-parsley imbewu kwigadi kunye nokuphuza umgubo ogqityiweyo ngeglasi yamanzi abilayo, ugxininise iiyure ezingama-2, ukupholisa, ukunyuka. 1 iglasi yokuxhamla ngosuku.
Ukusuka kwi-mucus emanzini omlambo ukunyuka kwama-50 amagremu e-edible medicine. 1 ithisipuni uthele iglasi yamanzi abilayo uze uyibeke ehovini ngeeyure ezingama-2. Yinyani. Phuza ubanda ¼ indebe kathathu ngosuku ngaphambi kokutya ezimbini iiiveki.
Kunokuba le nto iphela, kunokuba intliziyo ihlalise
Susa ityuwa emzimbeni ngelayisi
Ingqungquthela yamadoda nabesetyhini yindlela yokuphila?
Iimpahla zaseKalgan: zokupheka, inkcazo, iinzuzo
Kutheni kubalulekile ukuba siphile "apha nangoku"
Qalisa ukusebenza xa unqwenela ukuba ngumntu onempilo
Oyena mnandi kakhulu uMnumzana Efrosinina
Izakhiwo ezisetyenziswayo kunye nokusetyenziswa kwezikhwama zeegusha kwiimveliso
Indlela yokuphefumula ngokufanelekileyo xa ugada?
U-Anna Semenovich uya kuzama inxaxheba entsha
I-pantyhose spring springy 2016: imizekelo yeentlobokazi zentombi
Ukuxilisa i-urological, njengesixhobo esiyonyango ekwenzeni unyango lwe-prostatitis
Amanzi okuhlambela ebusweni
Indlela yokunciphisa ukutya kwezilwanyana zomntu
Ngubani ongayi kudla?